ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေစိုခံ ၇ လက်မ eReader ဖြစ်သော Kobo Libra H2O အသစ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည် eReaders အားလုံး
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေစိုခံ ၇ လက်မ eReader ဖြစ်သော Kobo Libra H2O အသစ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်
ဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်သူများ ကိုယ်ယူဆောင်လာပါ eReader ကမ္ဘာမှသတင်း။ ၎င်းသည် eReader ကိရိယာတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။ ၎င်းသည်ပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုအကြားရှိဝိသေသလက္ခဏာများသည် ပိုမို၍ ဆင်တူသည်၊ သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရောင်းသောအရာဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခု ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတစ် ဦး ဖြစ်ရှိရမည်အကောင့်သို့ယူပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုပစ္စည်း၏ပြောင်းလဲမှုကိုတန်ဖိုးထားစေသည် "တစ်ခုခု" (ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်ခုရှိနှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံး) eReaders များသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံး update လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများဖြစ်ခြင်းကြောင့် devices ဟောင်းများသည် eReader ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အဆင်ပြေစွာဖတ်နိုင်သောစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုပြပါ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအရသာအမျိုးမျိုးအတွက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိသောဒီဂျစ်တယ်စာကြည့်တိုက်များလောကတွင်အသိအမှတ်ပြုခံထားရသော Kobo မိသားစုဝင်အသစ်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ အခုလာပြီ Kobo Libra H2O ဟုခေါ်သောအလယ်အလတ်တန်းစားကိရိယာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များပေးသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် Kobo မှအသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ရေစိုခံ၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောမျက်နှာပြင်နှင့်အလင်းရောင်ရှိသည့်ဖန်သားပြင်များနှင့်ခလုတ်များပြန်လာခြင်း။ Kobo Libra H2O နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအားလုံးကိုသင်သိလိုပါသလား။ ခုန်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီ eReader အသစ်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုပြောပြပါမယ်။
ဒီနှစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ Kobo မှာရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေက eBook ဖတ်သူတွေလေ့လာနေတာဖြစ်တယ်၊ ဒီစာဖတ်သူတွေရဲ့ ၉၃% ကစာဖတ်ရတာကြိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါကသူတို့ကိုအနားယူစေတယ် နှင့်နေ့စဉ်အသက်တာ၏စိတ်ဖိစီးမှုမှလွတ်မြောက်ရန်။ က ဤ eBook ကိုနှစ်သက်သူများ၏ ၄၅% စာဖတ်ခြင်းသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းကြောင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၌ပြုလုပ်သောအခါ၎င်းတို့သည်ပိုမိုဖမ်းမိသည်ဟုသူတို့ခံစားကြသည် eReader။ ထိုအ Kobo ယောက်ျားတွေအဘယ်သို့ပြုခဲ့သနည်း Kobo Libra H2O eReader အသစ်ကိုစတင်ပါ။
H2O ၏နောက်ဆုံးအမည်ပါသော eReader အသစ်၊ ယခင်ပုံတွင်တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် Kobo Libra H2O သည်မည်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်မဆိုအကောင်းဆုံး eReader ဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ဒါပါ ၎င်းသည် IPX8 ကာကွယ်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်စိုစွတ်နိုင်သည်သာမကနက်ရှိုင်းသော ၃ မီတာအတွင်းနစ်မြုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် Kobo Libra H2O ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်နစ်မြုပ်သွားသောအခါစာမျက်နှာကိုပင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်ဆိုရမည်။
1 ၇ လက်မရေစိုခံမျက်နှာပြင် ၃၃၀ ppi ရေစိုခံ resolution ဖြစ်သည်
3 Kobo စတိုးရှိစာအုပ်အသစ်များကို Kobo Libra H2O မှရှာဖွေပါ
4 ဆောင်းပါးများကိုအိတ်ကပ်ထဲသိမ်းဆည်းပြီး Kobo Libra H2O မှသင်လိုချင်တိုင်းဖတ်ပါ
5 Kobo Libra H2O အသစ်ဝယ်ယူရန်
6 Kobo Libra H2O ဓာတ်ပုံပြခန်း
၇ လက်မရေစိုခံမျက်နှာပြင် ၃၃၀ ppi ရေစိုခံ resolution ဖြစ်သည်
ပြီးတော့သူက submersible device တစ်ခုသာမကဘဲ eReader မှာတွေ့ရတဲ့အကောင်းဆုံး screen တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ၃၀၀ ppi resolution ဖြင့် HD မျက်နှာပြင်၎င်းသည် ၇ လက်မအတွင်းရှင်းလင်းသောစာသားများရရှိရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။ စက်ကိုလက်တစ်ဖက်တည်းကိုင်ပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် နှိပ်၍ စာမျက်နှာကိုဖွင့်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ကိုမသက်မသာဖြစ်စေနိုင်သည်။ Kobo မှယောက်ျားများသည်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းခဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့ Kobo Forma တွင်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များ, ကုမ္ပဏီ၏အကွာအဝေး၏ထိပ်။ ၎င်းသည်စာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်တကယ်တော့ဒါက touch interface နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အလားတူပစ္စည်းတွေမှာကျွန်တော်အမြဲသတိမထားမိတဲ့အရာပါ။
El Kobo Libra H2O သည် Kobo Aura H2O အစားထိုးအဖြစ်ရောက်ရှိလာသည် ဒီဖန်သားပြင်တိုးလာတာနဲ့အတူဒီဇိုင်းကို Kobo Forma (Forma ၏ပုံစံမဲ့ပုံစံမရှိပဲ) ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ အတော်လေး ergonomics ဒီဇိုင်းကိုကိုင်ထားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုငြီးငွေ့ခြင်းမရှိ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အချို့လည်းပါပါတယ် Full-color အဖုံးများက၎င်းကို lectern တစ်ခုအဖြစ်ထားရန် "ခေါက်" နိုင်သည်.
ပြီးတော့သုံးစွဲသူရဲ့တောင်းဆိုမှုအရ၊ ကိရိယာအတွက်အဖြူရောင်ကိုကယ်ပါလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Kobo Pocket ကိုစဖွင့်ပြီးနောက်သူတို့အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ထားသောအရောင်တစ်ခု။ ဒါပေမယ့်ဝယ်လိုအားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, ပိုကောင်းဟုပြောသည်ဘယ်တော့မှနှင့် အသုံးပြုသူများအဖြူရောင်စက်ပစ္စည်းချင်တယ်သူတို့ရှိသည်။ ငါတို့ပြောခဲ့သည့်ရောင်စုံဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူ Kobo Libra H2O အဖြူရောင်သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
ပြီးတော့အရင်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Kobo Libra H2O သည် ConfortLight Pro အလင်းရောင်ကိုပွဲထုတ်ခဲ့သည်စွမ်းဆောင်နိုင်သည့်ရှေ့မျက်နှာပြင်အလင်းရောင် အလင်းရောင်အခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီရန်၎င်း၏အရောင်အပူချိန်ကိုခြားနားသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လွှမ်းမိုး။ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာအတိုင်းကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်သည်။
ငါရရှိသောရလဒ်အတော်လေးကျေနပ်စရာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ eReader ရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ function တစ်ခုလို့ငါမြင်တယ် ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလင်းရောင်နည်းသောပတ်ဝန်းကျင်များ၌၎င်းကိုလွတ်သွားလိမ့်မည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်အလင်း၏အကြောင်းအရာသည်မည်မျှဖက်ရှင်ကျသနည်း နွေးအရောင်အပူချိန် ငါတို့မျက်စိကိုဖိစီးစေသောအအေးဓာတ်ကိုရှောင်ကြဉ်သော Comfort Light Pro သည်ပြီးပြည့်စုံသောမျက်နှာပြင်အလင်းရောင်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Kobo မှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကဒီ Kobo Libra H2O တစ်ခုရချင်တယ် စာအုပ်မှတဆင့်အညွှန်းချည်။ သင်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားမည့်ကိရိယာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာအုပ်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းသစ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်ုပ်တို့သည်စာအုပ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများကိုအစမှအဆုံးထိသမားရိုးကျချည်မျှင်များမဖတ်ဘဲတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာအုပ်ရှိယခင်အချက်သို့ပြန်သွားရန်သို့မဟုတ်မည်သည့်အချက်အလက်အမျိုးအစားကိုမဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်အခြားတစ်ခုသို့ရှေ့ဆက်သွားရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
ကျေးဇူးတင် စာအုပ်ချည် မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်သင်နှိပ်သောအခါပေါ်လာသည့် (အချိန်ဇယားတစ်ခုအနေဖြင့်) ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို ဖြတ်၍ လိမ္မာပါးနပ်စွာရွေ့လျားနိုင်သည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲနိုင်သောစာမျက်နှာ၏သမ်းနေးကိုပြလိမ့်မည်။ ငါတို့လိုချင်တဲ့စာအုပ်ရဲ့အချိန်မှာတွေ့ပြီ၊ ကျနော်တို့ကချည်ထဲမှာပေါ်လာသောအနက်ရောင်စက်ဝိုင်းကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ယခင်အခိုက်ကိုပြန်သွားနိုင်ပါတယ်; ကျနော်တို့က3ကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်အထိလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Kobo Libra H2O သို့ကျွန်ုပ်တို့တင်သွင်းခဲ့သည့်စိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်သောစာအုပ်များသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုသောအခါအထူးသဖြင့်သင့်အားပြောပြသည့်အခါအလွန်အသုံးဝင်သည်။
Kobo စတိုးရှိစာအုပ်အသစ်များကို Kobo Libra H2O မှရှာဖွေပါ
အခြား eReaders များ (Amazon သည် Kobo ၏တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အတူ) ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် စာအုပ်ဆိုင်မှစက်ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်မှတိုက်ရိုက်ရယူပါသို့မဟုတ်စာအုပ်ဆိုင်, ကို virtual ကုမ္ပဏီ။ အကြောင်းကိုတစ် ဦး ကက်တလောက်ရှိပါတယ်တဲ့ကို virtual စာအုပ်ဆိုင် စာအုပ်သန်း ၇၀ နှင့်အော်ဒီယိုစာအုပ်များအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် format နဲ့, စျေးနှုန်းများအများဆုံးအဖြစ်အများဆုံး4ယူရိုမှ 13 ယူရိုအထိ။
စကားမစပ်အားလုံး စာအုပ်များဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ metadata ကိုအတူပါလာ, နှင့်သင်ယခင်ပုံတွင်တွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ဆိုင်းငံ့သို့မဟုတ်ပိတ်သောအခါ Kobo Libra H2O ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာငါတို့ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အဖုံးထားရှိခြင်းသည်အီလက်ထရောနစ်မှင်မှတဆင့်ရုပ်ပုံကိုတင်စဉ်အခါပုံသေတပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်လန်းဆန်းစေခြင်းမရှိသောကြောင့်ဘက်ထရီကိုမသုံးပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ပုံမှန်ဖန်သားပြင်မှပုံသဏ္averာန်ဖြစ်သည်ကိုသိသော်လည်းသို့သော်ရုပ်ပုံများကိုပြသောအခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဖတ်နေသောစာအုပ်၏မျက်နှာဖုံးကိုပြသထားသည် (မည်သူ့ကိုမှဤအရာကိုမမြင်လိုပါကပြောင်းလဲနိုင်သည်) ။
ဆောင်းပါးများကိုအိတ်ကပ်ထဲသိမ်းဆည်းပြီး Kobo Libra H2O မှသင်လိုချင်တိုင်းဖတ်ပါ
ဒါပေမဲ့ Kobo virtual bookstore မှတဆင့်ဝယ်ယူထားသောစာအုပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထပ်ထည့်နိုင်သည်Kobo Libra H2O ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်နှင့်ပြင်ပ drive တစ်ခုကဲ့သို့ဆက်သွယ်ပြီး၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စာကြည့်တိုက်ထဲသို့တင်သွင်းခြင်းဖြင့်လည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော Kindle နှင့်မတူသည့်ကိရိယာများ Kobo သည် EPUB ပုံစံဖြင့်စာအုပ်များကိုအသုံးပြုသည်ကျနော့်အမြင်မှာ Amazon ကသုံးတဲ့ Mobi ထက်အများကြီးပိုပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တခြား Kobo မော်ဒယ်လ်တွေလိုပဲဖိုင်တွေလည်းသုံးနိုင်တယ် PDF ဖိုင်ရယူရန် ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီကိစ္စမှာငါတို့စာစီစာရိုက်ခြင်းကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာအချို့ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ငါအများဆုံးကြိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Pocket အကောင့်ကို Kobo Libra H2O တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်ကပ်သတင်းမန်နေဂျာတွင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရသောစာမူတစ်ခုသို့မဟုတ်သတင်းများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ eReader တွင်ချက်ချင်းရယူခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလမ်းပေါ်တွင်ရှိသည့်အခါ၊ ဤလုပ်ဆောင်မှုဖြင့်ဆောင်းပါးများကိုသိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယနေ့တွေ့မြင်ရပြီးအလွန်အသုံးဝင်သောအရာ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို "Reader" မှဖတ်နိုင်သည် (ဖောင့်ကိုပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးနှင့်စသည်တို့) ကြော်ငြာတင်ရန် ကျွန်တော်တို့ကိုအာရုံရန်။
ဤ Kobo Libra H2O အသစ်နှင့်အတူ eBooks သို့ပြန်သွားသည် စာအုပ်ပေါင်း ၆၀၀၀ အထိကိုင်ဆောင်နိုင်သည် ဘာမှမလိုအပ်သောအရာများ၊ အရွယ်အစားကိုသင့်အနေဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်မျှတသောစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ ကြောင်းစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်တဲ့စွမ်းရည် အချို့လေ့လာမှုများ၏ပြောကြသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်စာအုပ် ၂၀၀၀ မှ ၄၀၀၀ ကြားသာဖတ်နိုင်လိမ့်မည်.
Kobo Libra H2O အသစ်ဝယ်ယူရန်
ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသည်နှင့် eReader ဈေးကွက်တွင် Kobo ကဲ့သို့သောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတည်းကိုပင်အာရုံစိုက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဒီအသစ် Kobo Libra H2O ကိုယူရို ၁၇၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည် eReader ၏အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော Amazon Kindle Oasis ၏ဈေးနှုန်းနှင့် (၂၄၉.၉၉) ဈေးနှုန်းဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ရမည့်စျေးနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Kobo Libra H249,99O ဟာစျေးသက်သာတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်ထိကြိုတင်မှာယူနိုင်သည် Kobo တရားဝင်စာမျက်နှာ (စက်ပစ္စည်းများအပိုင်း) နှင့် Fnac (အဓိကလက်လီအရောင်းဆိုင်) တွင်။ အများဆုံးဥရောပနိုင်ငံများတွင်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုတွင်အကာအကွယ်အဖုံးတစ်ခုပါ ၀ င်နိုင်သည်
ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်လာနိုင်သည်
ဒီတော့အခုသင်သိပြီ၊ သင် eReader တစ်ခုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်၊ Kobo Libra H2O အသစ်သည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းတွင်ရှိသောလက္ခဏာများပါ ၀ င်သောပစ္စည်းတစ်ခုမှမျှော်လင့်ထားသည့်အရာအားလုံးရှိသည်။ The eReader စျေးကွက်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်သည် နှင့်ဤကိရိယာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေရာတိုင်း၌ကောင်းသောစာအုပ်တစ်အုပ်ခံစားရန်သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်။ Kobo Libra H2O သည် eReader ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Kobo Libra H2O ဓာတ်ပုံပြခန်း
Kobo Libra H2O ဖြစ်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Kobo » ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေစိုခံ ၇ လက်မ eReader ဖြစ်သော Kobo Libra H2O အသစ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်
ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အစဉ်မပြတ်ကျွန်တော် Kobo ကိုအမြဲတမ်းသိချင်နေခဲ့ပေမယ့် Kindle ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
မေးခွန်းတစ်ခု - အဘိဓာန်များ၏ခေါင်းစဉ် - သင်သူတို့ကိုထည့်သွင်းထားသလား။ ရှိတ်စပီးယား၏ဘာသာစကားဖြင့်စာအုပ်များကိုဖတ်ရန်အင်္ဂလိပ် - စပိန်အဘိဓာန်?
ငါ့အဘို့အကြီးမြတ်တဲ့သီလတစ်ခုမှာ၎င်း၏စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အရွယ်အစား၊ စျေးနှုန်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များကြောင့်၎င်းသည် Kindle Oasis ၏ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပြီးဈေးချိုသည်။ Amazon ကကြယ်စာဖတ်သူရဲ့ဈေးကိုယူရို ၂၀၀ အထိလျှော့ချတော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ငါထင်တယ်။ ကျနော်တို့ဖြစ်ရပ်များကိုစောင့်ပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ၎င်းသည် Kobo-Kindle စစ်ပွဲ၏နည်းနည်းသာဖြစ်ပါကနောက်ဆုံး၌သင်နှင့်အဆင်ပြေဆုံးစာဖတ်သူကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းတွင် built-in အဘိဓာန်များပါရှိပြီးသင်လိုချင်သောအဘိဓါန်များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်နေသည့်စာအုပ်၏ဘာသာစကားကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသောအချိန်တွင်အလွန်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
ငါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲဝက်ခန့်ကဒီ eBook ကိုဝယ်ခဲ့တယ်။ ခဏအကြာတွင်၎င်းကိုအသုံးမပြုဘဲယခုမျက်နှာပြင်၏ထက်ဝက်သာအလုပ်လုပ်သည်။ Kobo ကုမ္ပဏီမှ၎င်းတို့သည်ဤပြုပြင်မှုကိုဂရုမစိုက်ဟုပြောကြသည်။ ၎င်းသည် Kobo Libra H2O ဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မော်ဒယ် ... Kobo ကငါ့ကိုစိတ်မပျက်စေတဲ့၊ သူတို့ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ မင်းသူတို့ကိုစာမဖတ်တတ်ဘူး။ «ပြန်လည်သုံးသပ်»အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါ Kobo ကိုအမြဲတမ်းသုံးလေ့ရှိတယ်၊ အခုငါ့မှာကွယ်လွန်သွားပြီ၊ ငါဒီ“ Libra” နဲ့ဆက်သွားမယ်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်း
အကြှနျုပျ၏ e- စာဖတ်သူသည်မကြာသေးမီက "ကွယ်လွန်သွားပြီ" နှင့်ယခုအခြားဝယ်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ငါဒီပုံစံကို Kobo ဆီကဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ မေးခွန်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။ COPS နဲ့လိုက်ဖက်ညီလား (Caliber OPDS HTML PHP Server: http://cops-demo.slucas.fr/feed.php)?
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်ကို COPS ဖြင့်တပ်ဆင်ပြီး၎င်းမှကျွန်ုပ်၏စာအုပ်များကိုကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူအသစ်သို့ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုသည်။
Xiaomi သည်၎င်း၏ e-book ကိုနို ၀ င်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင်တင်ပြမည်
မိုက်ကရိုဆော့ဖ် eBook များကယခုလတွင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောဆိုကြသည်